वामदेवलाई रोक्न खोज्दा नेकपामा बबण्डर - Dainik Page
१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०६:३५ 64 पटक हेरिएको
काठमाडौं : उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयसँगै पार्टीमा विवाद बढेको छ । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली यसमा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
‘पार्टीका नेताहरू नै अर्थमन्त्री खतिवडाविरुद्ध विभिन्न मान्छेसँग मिलेर लागेको सूचना मेरासामु आइपुगेका छन् । यो सरकारविरुद्धकै घेराबन्दी हो । खतिवडाजी सरकारका पिलर हुनुहुन्छ । उहाँलाई म दोहोर्‍याएर जान्छु,’ नेपालसँग प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले खतिवडाका पक्षमा उहाँ (नेपाल) लाई मनाउन अनेक प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ । तर, उहाँले खास प्रतिक्रिया दिइसक्नुभएको छैन,’ नेपाल निकट एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने । ओलीले गत पुस २३ गते वामदेव निवासमा बसेको पार्टी नेताहरूको गठबन्धन तोड्न चाहिरहेका छन् ।
‘मेरो विषय उठ्नेबित्तिकै जहिल्यै विवादमा पारिन्छ, किन ? कसले खेलिरहेको छ यस्तो खेल ? मलाई बदनाम गराइरहन अनेक खेल खेल्दै हिँड्ने हो भने मलाई पार्टीबाट निकालिदिनुहोस्’, बुधबारको सचिवालय बैठकमा गौतमले गुनासो गरे ।
उनले बुधबारको सचिवालय बैठकमा भने, ‘पार्टीको निर्णय म मान्छु, तर कार्यदल भंग गरे पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मेरो माग यथावत् छ ।’ सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधन कार्यदलको विषय बाहिर नलाने सहमतिविपरीत सचिवालयकै साथीहरुबाट कसरी बाहिरियो ? यसले पार्टीलाई राम्रो गरेन । अब यो कार्यदल के गर्ने ? वामदेवका विषयमा के गर्ने ? छलफल गरौं भन्दै पार्टीमा वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत पदमा लैजान प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘वामदेवजी पनि अब अरु कुरा नगर्नुहोस् । राष्ट्रियसभामा जाने विषयमा सोच्नुहोस् । मेरो प्रस्ताव छ– वामदेवजीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाऔं,’ दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए ।
ओलीले पार्टी बैठकबाहिरै गरेर आएको निर्णय सुनाउन नेताहरुलाई आग्रह गरेपछि बैठकमा केहीबेर सन्नाटा छाएको थियो । नेताहरुको मौनता चिर्दै अध्यक्ष दाहालले कहींकतै त्यस्तो निर्णय नभएको जानकारी गराएका थिए ।
‘पार्टीका सबै सचिवालय सदस्यहरु संघीय संसद्मा रहेका कारण वामदेवलाई लैजाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो,’ दाहालले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने गौतमले नजाने भनेपछि पहिले दिएकै व्यक्तिलाई वचन दिइसकेको विषयमा के गर्ने भनेर धारणा राखेको स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रियसभामा वामदेवजीलाई लैजाने विषयमा मैले पहिल्यै कुरा गरेको हुँ । उहाँले मान्नुभएन । संविधान संशोधनको एउटा प्रक्रियामा तपाईं (गौतम) लाई लैजाऔंला । अहिले पहिल्यैकालाई वचन दिइसकेका छौं । उहाँले राम्रो काम गरिरहनुभएको पनि छ । उहाँलाई नै लिएरै जाऔं’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाल, श्रेष्ठ र महासचिव पौडेल गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान तयार देखिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने वामदेवको निर्णय संगतिपूर्ण नरहेको भन्दै राजनीतिज्ञले निर्णय लिँदा संगतिपूर्ण कुरा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘वामदेवजीले पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्रै जाने भन्नुभयो । कार्यदल पनि बनाइयो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रियामा संविधान संशोधन गरेर जाने भन्ने भयो । तर फेरि उहाँ (गौतम) ले संशोधन नभई जान्छु भन्ने कुरा संगतिपूर्ण र शृंखलामा भएन’, सचिवालयका एक नेताले थापालाई उद्धृत गर्दै भने, ‘वामदेवजी यो ढंगले जानु हुँदैन । पहिले पनि गल्ती भयो । जान्छु भनेर नजानु गल्ती भयो । निःसर्त जान्छु भन्नु फेरि अर्काे गल्ती भयो । यसले नेतृत्वलाई ड्यामेज गर्छ । पार्टीलाई पनि हित गर्दैन ।’